News - Codsiyada carbide silicon
Waa la wada ogyahay in carbide-ka silikoonku leeyahay codsiyo aad u tiro badan oo kala sooca, warshadaha kiimikada, cilmiga metallurgy-ga, qalab casriyeyn oo horumarsan, dhoobada horumarsan iyo qeybaha kaleba waxay leeyihiin codsiyo aad u ballaaran. Iyada oo hal-abuurnimo isdaba-joog ah oo tiknoolajiyada qalabka wax-soo-saarka ah, waa wadada kaliya ee horumarinta caafimaadka leh ee warshadaha sic mustaqbalka si loo xoojiyo horumarinta codsiyada cusub iyo suuqyada dalabyada cusub loona ballaariyo fikradaha maamulka.
Isticmaalka carbide silicon waa mid aad u ballaaran, sida metallurgy, mashiinada, warshadaha kiimikada, qalabka dhismaha, warshadaha iftiinka, elektaroniga, jirka kululaynta, abrasive ayaa loo isticmaali karaa sidii wax lagu nadiifiyo, deoxidizer iyo hagaajiye ee warshadaha biraha. Waxaa loo isticmaali karaa sida aaladda carbide-ka loo yaqaan 'synthetic tool' ee ka shaqaynta. Saxanka kaarboon-ka silsiladda ah ee la warshadeeyay ayaa loo isticmaali karaa inuu yahay wax diidaya saxanka dhoobada dhoobada laga rido Budada wanaagsan ee la soo saaray ka dib marka la dhammaystiro hawsha waxaa loo isticmaali karaa sida dahaadh loogu talagalay qaybaha elektaroonigga ah ee teknolojiyada sare iyo qalabka shucaaca fog ee infrared. Budada wanaagsan ee nadiifka ah ayaa loo isticmaali karaa sidii daahan loogu talagalay maacuunta aerospace ee warshadaha difaaca qaranka. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Taxanaha jejebiyey daanka, taxane mashiin qaadashada taxane, taxane mashiinka jajabi ah, taxane mashiinka shiida, taxane jajab jajab, taxane jajab, mobile taxane shaashad iyo wixii la mid ah oo ay leeyihiin Anteli Carbon Waxyaabaha Co., LTD. shaqaalaha warshadaha gudaha iyo dibedda. Iyada oo waxtarka sare iyo keydinta tamarta ee wax soo saarka carbide silicon iyo ganaax ilaa heerka qaranka, burburiye waa qalab lagama maarmaanka u ah qaabeynta dhagaxa iyo processing. Taxanaha mashiinka shiidi ee mashiinka shiidan ee cadaadiska sare ee ay soo saarto shirkadu wuxuu ogaan karaa shuruudaha silikoon carbide tiknoolajiyada waxsoosaarka waxsoosaarka super-ganaax, waana qalab wax ku ool ah oo lagu xaqiijin karo dalab balaaran ee carbide silicon ee warshadaha.
Waqtiga dhejinta: Jan-06-2011